Aqoonyahan mise In-dheer-garad
Cismaan Nuur Ducaale
"Addunyada nin noolow maxaa Aragti kuu laaban"
Halka aynnu ku nool nahay waa adduunka ee maaha aakhiro. Waxa dhigan ama qoran in adduunka dhaqankiisu is dhalan-rog badan yahay oo aanu lahayn meel loogu soo hagaago. Waa sida hadhka (hooska) marna bari kaa qabanaya marna galbeed. Nolosha adduunku waxay ku dhisaalantahay damac jaadad(noocyo) badan oo noqon kara mid nolol eryasho ah iyo mid xukun doon ah. Markii jannada Aadan iyo Xaawa laga soo saaray baa hawshani iyaga iyo tafiirtoodiiba u billaabantay. Qaabiil buu ahaa kii ugu hoorreeyey ee dhiig ku daadiya carro edeg( dunida) dusheeda. Bal garoo naftuu jaray(diley) waxay ahayd tii walaalkii Haabiil. Waxa keliya ee uu ku diley waxay ahayd " Siduu u helaa wax aanan anigu helin." Markay taasi dhacday waxa galay damac kale oo aqoon raadis ah si uu u basriyo maydka walaalkii. Isagoo yaabban ayaa Ilaahay u suurta geliyey inuu tuso laba tuke oo is diley oo kii wax diley kii kale intuu god faadh-faadhay raqdii tukaha kale ku aasay. Qaabiilna halkaas ayuu kaga dayday tukihii iyo farsamadiisii.
Waayaha iyo baahida ayaa noolaha taba bara damacuna noloshuu ka dhex ulkamaa. Noloshu waxay ku barayso waxa ugu weyn is difaaca (is jirka ). Gaajadaad iska difaacaysaa, dhaxantaad iska difaacaysaa,xanuunkaad iska difaacaysaa cadow dad iyo dugaagba lehna waad iska difaacaysaa. Inkasta oo ay taasi jirto haddana dadku wuu ka duwan yahay duurjoogta ama xayawaanka oo si kasmo iyo garsho dheerada leh ayuu u maareeyaa arrimaha murga. Dadku wuxu leeyahay xadhka xidha iyo xeerin uu xeeriyo waxyaabo fara badan. Haddii baahiyi bini aadamka qabsato iskuma loolo oo markiiba waxwalba ma quutee wuu ka dhowrsadaa oo waata soomaaliduba ku maah-maahda " Waad baahantahay, looma bahalo cuno."
Dadku siigga dida maaha
Sogob iyo ri'weyn maaha
Waxan uga socdaa heedhe
Naftu seeto yey waayin
Hana falin sidaad doo
( Sirta nolosha. Maxamed Ibraahin Warsame - Hadraawi)
Af nooli hadal ma daayo e, maantana uurkaygaa hayn kari waayey qormadan halaanhalka iyo hawaala-warranka intaba la hadaafeysa. Waxay la hadlaysaa bulsho jiifka ku siiganaeysa( besteed ah) oo ah isuma ciirsato, isma caawiso haddana cadow qudha wada leh. Waa ummad garan-gar wada deggan oo is mudan haddana samihii laga sumeeyey xumihiina loo subageeyey. Gelin way is garab taallaa gelinna way kala guuraysaa. Gelin way is waraabinaysaa gelinna way is gawdhinaysaa. Waa ummad in-dheer-garadkii laga dabray oo mid aqoonyahan la baxay loo cambariyey oo guradiisa saaran. Labada eray ee "Aqoonyahan iyo In-dheer garad " ayay qormadaydani maanta daarran tahay waxaanan jeclaan lahaa akhristow inaad dhug iyo fiiro u yeelatid.
Qofka bani aadmiga ahi wuxu sidiisaba la dhashaa ha yaaraato ama ha badnaatee garasho ama waxa af-soomaaliga loo yaqaan " dhugmo ama dhug" oo afka ingiriisidana loo yaqaan " intelligence." ama "intellect." Dhalashada ka dib qofku wuxu la kacaa kufaa nolosha ku xeeran. Qof baa jira aad u fiira dheer oo ka fir-fircoon mid kale oo isagu meel dhow wax ka eega. Markay haddaba joogto wax barasho, Qofka fiirada dheer wax barashadu fiira dheeridiisa waxba uma dhinto ee sidii faras nadiga (shaabuugga) lagu jiidey(dhuftay) ayuu kasii bad-badiyaa. Qofka fiirada gaaban waxay waxbarashadu u tartaa oo keliya aqoon korodhsi iyo ogaal ku saabsan wax aanu ogeyn, hase yeeshee garashadiisa iyo kartida qof ahaaneed waxba kama bedesho. Cali suguulle ayaa wuxu yidhi oo laga hayaa: " Af qalaad aqoontu miyaa? Maahee hadba waa intuu qofba Eebbe geshaa. Af qalaad aqoontu miyaa? Maya maya. MA OGTAHAY DIB LOOMA ABUURO DADKEE?" Haddii aanad karti garsho iyo fiiro dheer lahayn, haddii aanad danta guud u xilan markay kula gudboonaato, haddii aanad go'aan qofnimo iyo garasho suubban lahayn waxbarashada iyo aqoonta aad dhigataa waxba kaa bedeli mayso oo kii uun baad ahaanaysaa. Waxa ayaan badan qofka dhug iyo garasho lahaa markii hore aqoon iyo waxbarashana ku darsaday. Hadal iyo dan waxan uga socdaa araartan iyada ah waxa nolosha isku dhaxlay maanta mid la magac baxay aqooyahan oo ka madhan karti garasho iyo indheer-garad ilaahay ku mannaystay fiiro iyo dhugmo u-dhalasho ah.
Qarni iyo labaatan sano ayaa laga joogaa markii Gumeysi cadi soo hungureeyey ciidda soomaalida isagoo ugu horreyn magaalada Ber-bera soo caga dhigtay. Odayaal aan iskuullo iyo ilbaxnimo goonni ah lahayn ayay aqoontoodii siisay inay sayn caddaalihii la gor-gortamaan oo ku dirqiyaan, mar haddaanay awood iyo cudud ciidan ku caabbiyi karin ninkan cad ee soo qoor diitey, inuu yeelo heshiis labada dhinac ah oo lagu kala qorto SAAN xoolaad waayo may jirin warqad ama wax kale oo wax lagu qoraa. Waxay odayaashii nimankii cad-caddaa ku yidhaahdeen halkan waxad ku qortaa:
1- In aan nin cad ciiddayada lagu aasi karin
2- In aan nin cadi gabadh soomaaliyeed guursan karin
3- In aan ilmo cadi ku dhalan karin ciid Soomaaliyeed
Waxaas oo qodobbo ahi waxay ku saab sanaayeen wax keliya oo ah " Dhulkayga marti ku noqo laakiin haygula wadaagin dhimasho, dhaxdin( guur) iyo dhalasho midna si aanad hadhow iila sheegan."
Berigaasi beri buu ahaa. Wuxu ahaa beri beentu canbaar aan go'in ku ahayd ka lagu yaqaan. Wuxu ahaa beri runta la caleemo saari jirey ka yidhaahdana geesinnimo lagu maamuusi jirey. Wuxu ahaa beri cadka quudheed gunnimo ahaa oo ninkii markaa jirey cunistiisa dhimasho ka xigey. Wuxu ahaa beri talada iyo arransiga lagu higgaadin jirey waxa soo socda idanka ilaahayna loo cuskan jirey. Berigaas arrin keen iyo aqbal keen baa wax lagu guddoomin jirey. Berigaas fara badnaantu qiima ma lahayn ee tayadaa wax ku ool ahayd.
Xilliyadan danbe Soomaalidu waxay wada noqotay tab-yaqaan(siyaasi) taasoo keentay in nin waliba u soo ciimaamato gacan- otgaalaynta tabta( siyaasadda) soomaalida ee laga caal waayey. In-dheer-garad soomaaliyeed baa waxa laga weriyey maah-maahdan "Hal ilmo ku qalloocday hadba nin gacan gashey( gacan ku dey.) Ma jecli inaan maah-mahda halkaa u sii dhaafo balse aan ujeedadayda ka badheedho. Xilliga aynu maanta joognaa waa xilli wixii gadh leh oo qudha loo xulanayo madasha garta iyo gorfaynta xaajooyinka, wixii garasho lehna aan cidiba soo hadal qaadayn oo cidla lagaga tegayo.
Tagtada dib u jeedaali oo akhri ama soo jooge weydii dagaalkii ay Soomaaliya iyo xabashidu isku fara saareen gugii 1964-kii. Waxa Soomaalidu berigaas lahayd ciidan yar oo u badnaa askartii daraawiishta loo yaqaanney. Ciidanka soomaalidu wuu ka arradnaa dhammaanba hubka waa-weyn ee imminka loo yaqaan tiknikada sida kaarayaasha, bee-beega, bm-ka iyo gantaalaha dhowrka tahan ( kiiloo mitir) wax ka toogta, qorigooda ugu weynina wuxu ahaa ka gacanta lagu qaato oo ka tayo yaraa Ak-ga. Si kastaba ha ahaatee xabashidii isu soo habar wacatay raaf bay dhaqaajin kari weydey waxana muquuniyey ciidamadii tirada yaraa ee soomaalida ahaa. Waa tii uu cabdillaahi Suldaan Timacadde lahaa:
"Annagoon gantaalaha dhaca iyo haysan qori gaaban
Hashaan gaadda weynow libaax uga gabboon waayey
Inaan gurayo cawl uga tagaa waa hal soo gudhaye"
Taa waxa ku xigey in xamar dhexdeeda xabashidu gashaantiyaha iyo marwooyinka intaba ku fara xumeeyaan iyada oo rag Soomaaliyeedna ay u gees iyo gafuurayaan. Waxa xigtey Yahaadhi tikree ah iyo Soomaali iska garab dagaallamaysa oo dhan xabadda u wada rideysa. Waxa xigtey askari Soomaali ah oo qaadaya dhaawac xabashiyeed isagoo indhaha ka lalinaya oo aan dan iyo muraad ka lahayn dhallaan iyo hooyo isu ciidmi waayey. Waa adduunyo ee waxba ha la yaabin haddaad sii noolaatana wax ka daran baad arki doontaaye.
" Taariikh guurtayeey, maadigaa gedmadey.Waayaha gudbow maydinkaa gurta leh. Muddo gebo-gebooy, maadigaa gabno ah
Xilli guursadow gosha maad lahayn. Giddi maalmahow maxaad geysateen. Galabsateen habeenadan guurayow.
Been gurafegey, maadigaa galbaday. Runta gaabisaay miyaad gaadhaysaa?"
Aadan Jaamac Tarabbi( tuug Taraabbi)
Waxba yaanan dareen caal waa la hagoogtay xusuusta ku mud-mudin. Waxba yaanan doogta ku kicin geesi ku hungoobey hankiisii. Waxba yaanan nabarrada Soomaalinnimada beri hore layska cuudiyey ama layska dhakhtariyey ee sii bogsanaya caabuqunin oo damqin. Waxba yaanan SAMIR TAAG WAA ladh iyo umal ku soo kicin. Waxba yaanan dhalanteedka la tashanin. Waxba yaanan dhaan dabagaalle oomanka ku aroorinin. Waxba yaanan u xilanin tayda gaar ahaaneed. Waxba yaanan riyada la heshiinin anoo runta arka. Waxba yaanan anigoo weerar iyo rogaal ku jira oo og inaanan rag is hurayn haddana nabadda u reer iyo raro samaynin . Waxba yaanan sidii MAGAN indhaha ka lalin hashayda aan raqdeeda ka dul dhacay. Waxba yaanan aqoontayda u dabrin ka dhursugga talada saaran daruuraha dabaylaha xagaagu hadba dhan u wadaan. Waxba yaanan anigoo garanaya aayadihii beder iyo uxud ku soo degey haddana dadka wacdi ficil la'aaneed ku tujin. Waxba yaan wax aanan huri doonin, yeeliddisu iyo ku dhaqaaqiisu aanu iga gelin hummaag iyo hiimse - hiimse. Waxba yaanan ka gabar-gaalin gel-gelinta hortayda ah waxa soo yuurura.
Waxa is weydiin mudan tolow maxaa ku dhacay jidh damaqii kalee Soomaalida. Tolow illeen erayna waa laysu yidhaahdaaye maxaa gabbaanadey intii kale ee aan liishaanka gantaalaha lagu tijaabineynin. Tolow miyay baqeen? hadday baqeen ma xabashiday ka baqeen mise wax kale? maya, xabashida kamay biqine wax kalaa jira. Waxa jira oo dhab ah maah-maahda tidhaahda "fufsato ma kala geeri naxdo" Dhulka miyiga(baadiyaha) ah marka roobku raago waxa la kala boobaa dooga yar ee dhacarta ah ee ka soo fufa dhulka. Markaa haddii qolo kale ay la'dahay meel ay fuf ka hesho dhimashadeeda iyo geerideeda lagama naxo. Waxan uga socdaa qayb kastoo soomaalida ahi doc yar bay gashay markaasay ku luuqaysay " haddii aanan belaayooy, buulkayga kaa gelin,bisinkana xijaab odhan."
Adigaa iska qubaye hoo inaadeer .
Laba nin oo soomaaliyeed oo xigto ahaa (tol ahaa) ayaa xurgufi beri dhex martay ka dibna waxay taasi kelliftey in mid uu kii kale dhaawac xun oo dhinaca addinka ah u geysto. Ninkii dhaawaca loo geystey ilaahay waxba kuma yeelin ee wuu ka kacay (ka bogsadey) laakiin dhaawicii wuxu kaga tegey ama ku reebay dhitis ama laangadhennimo. Guyaal badan baa ka soo wareegey maalintii shilkaasi dhacay oo lagu kala samray layskuna gacan qaaday ka garnaqii arrinkaas isaga ahaa. Muddo dambe ayaa ninkii dhaawaca geystey soo martiyey inaadeerkiisii uu dhaawaca u geystey. Maxaad ku soo hoyateen iyo nabad baannu ku soo hoyanney lays dhaafsey ka dibna ninkii loo soo hoydey wuxu u soo godley hal wuxuuna haduub-gaalkii oo uu xoorkii cirka marayo ula soo dhaqaaqay xaggii inaadeerkiisii martida u ahaa. Intii uu soo sidey caanaha ayaa illeen waa nin dhitinaya oo hadba dhinac u heetinaya e markuu tallaabo qaadaba waxa daata in caanihii hadhuubka ka buuxay ka mid ah. Ugu dambayntii ayaa in yar oo caano ah uu kusoo simay ninkii martida ahaa wuxuuna markuu u dhiibayey ku yidhi " hoo inaadeer adigaa iska qubaye." Hadal iyo dhammaantii, waxan odhan lahaa soomaalida shiishka lagu bartay " waxba ha qawedina (saluugina) hiil yaraanta soomaalida kale idinkaa walaalkiin laan-gadheeyey e."
Aniguna mid baan filayey welina filayaa.
Waxa la yidhi nin dagaal yahan ahaa oo laga fadhiyi waayey ayaa qolo ay abtirsiimada is xigeen nafta isugu keenay ka dibna waxay ku tashadeen inay soo dilaan isaga iyo ciidankiisaba. Iyadoo loo diyaariyey colkii weerari lahaa ninkaas ayaa wax soo dhacay war sheegaya in ninkii colka loo diyaariyey la diley oo uu ku baxay gacan qolo kale oo aanay isku abtirsiimo ahayn. Abbaanduulihii colka watey ayaa marka keliya wuxu yidhi " Duullaanka la baajin maayo ninkii hebelna waynnu u soo aaraynaa." Idanka ilaahay la arkee inay sidaa u dhacdo.
Soomaalidaa waxay tidhaahdaa haddii laba libaax is dilaan waxay heshiin karaan uun marka uu dhidar u muuqdo. Tolow ma halaan-hal iyo riyo aan jirin baa mise waa ishaaro afkayga ilaahay ku soo tuuray oo dayacan way isu hiilin doontaa. Imminka magac iyo milgo toonna ma lahoo waa laba dhidare, tolow goormay libaaxa (xabashiga) qabsaday wada arki oo u heshiin? Mise anaa is daalinayee xaalkeeduba waxa weeye " Doqontu laba iyo toban indhood bay leedahay. Mid (hal) qodaxda ayay iskaga ilaalisaa kow iyo tobanka kalena ka cid ugu xiga ayay iskaga eegtaa." Bal haddaba in-dheer-garad la diidye aqoonta borofasoorradu ha ka saareen waddanka yahaadhiga xasladey ee salka dhigay gurada muqdisho. Keentaye yaa kaa saari. "Karis xun iyana wax ku la'. "